Mianara ny teny Anglisy sy ny fiteny vahiny ho an'ny Free. Hanatsara ny voambolana
Free fampiharana finday ho fanatsarana voambolana sy
mianatra fiteny vahiny
Sehatra fampianarana ho an'ny fifandraisana iraisam-pirenena
tarp gimtosios kalbos
Ny LingoCard dia manome sehatra iraisam-panabeazana iraisam-pirenena mba handinihana ny fiteny vahiny sy ny fampiharana fifampiresahana.
Mamaha ny olana lehibe ho an'ny mpianatra amin'ny fiteny izahay:
Fampitomboana ny voambolana sy ny fitehirizana teny maharikoriko
Tsy manam-potoana hianarana fiteny vahiny
Mitadiava ireo mpandaha-teny amin'ny teny vahiny
Free fampiharana finday
Teny 2 tapitrisa amin'ny fiteny manerantany be mpampiasa indrindra eran-tany
Fangataham-baovaon'olo-tsotra ho an'ny fiteny vahiny
Fikojakojana ny rahona ho an'ny teny mahatsiaro henjana
Henoy ny fanononan'ny teny sy ny fehezanteny
Fahaizana mianatra 67 fiteny vahiny tsy misy fifandraisana aterineto
Mamorona tahiry manokana miaraka amin'ireo teny izay ianaranao amin'izao fotoana izao
Mpanaitra an-tsarimihetsika ho an'ny mihaino ny databaranao
Mamorona karatra fàkana amin'ny teny mifatotra
Mpihira amin'ny feo tokana
Tsy manam-potoana hianarana?
Amin'ny alàlan'ny mpilalao feo tokana dia afaka mianatra fiteny ianao na aiza na aiza:
Raha mitondra fiara, mampihatra, amin'ny asa - mifanaraka amin'ny raharaham-barotra.
Safidio fotsiny ny tahiry, manomboha ny mpilalao ary mihainoa.
Te-hianatra ny fitaovam-pampianaranao manokana ve ianao?
Tsy misy olana - Ampidiro fotsiny ny rakitrao manokana ao amin'ny fampiharana finday ary mihaino!
Famoronana sehatra fanabeazana iraisam-pirenena
Famoronana fitaovana izay mamela anao hitadidy teny sarotra
Famintinana ireo tahiry azo ampiasaina farafahakeliny amin'ny loharano iray
Ampio ny olona hitadidy teny, andian-teny sy fehezanteny
Famoronana rindrambaiko malalaka ho an'ny olona avy amin'ny firenena sy fiteny rehetra
Famoronana fampiharana finday izay miasa tsy misy fifandraisana amin'ny aterineto na aiza na aiza manerana izao tontolo izao
Fanampiana amin'ny sekolin'ny teny sy mpampianatra amin'ny fiteny vahiny
Famoronana fitaovana ampiasaina amin'ny fampiharana ny teny marina
Tahiry isam-bolana dia fitambarana ny teny tsy hay hadinoina (sazy) izay ampidirina ao anaty tanana ary avy hatrany avy amin'ny tahiry rehetra amin'ny alàlan'ny tsindrio ...
Ny tahiry Active dia singa amin'ny teny tsy hay hadinoina (sazy) izay ampidirina ao amin'ny tanana ary avy hatrany avy amin'ny tahirin-tserasera amin'ny tsindrio ny bokotra "Move to Active". Ny tahirin-kevitra mavitrika no toerana voalohany hitehirizana ireo teny vaovao sy soso-kevitrao. Afaka manampy teny tsy voafetra ianao. Ny teny vaovao tsirairay dia noforonina manaraka ao amin'ny lisitra. Azonao atao ny manindry ny lisitra ary ny karatra flash amin'ny teny (sazy) dia hosokafana. Ny tahirin-kevitra mavitrika dia voatahiry ao amin'ny fampiharana foana, na inona na inona fiovan'ny fiteny, maka na manolo na manova daty hafa.
Afaka mamorona tahiry manokana miaraka amin'ny fitaovana fianarana amin'ny rakitra an-tsoratra ianao ary mampiasa izany amin'ny fitaovana rehetra amin'ny fampiharana ny LingoCard.
Afaka mamorona tahiry manokana miaraka amin'ny fitaovana fianarana amin'ny rakitra an-tsoratra ianao ary mampiasa izany amin'ny fitaovana rehetra amin'ny fampiharana ny LingoCard. Ny habetsaky ny fampahalalana rakitra dia tsy voafetra. Azo atao ny mamorona daty vaovao na mampiditra ny angona amin'ny tahiry efa misy ary efa navoaka aloha. Amin'ny alalan'ity asa ity, dia afaka mamorona ho an'ny tenanao fitaovam-pampianarana ianao ary mampiasa izany miaraka amin'ireo fitaovana entina mitadidy.
Archive ho an'ny karatra nianatra. Raha nianatra ilay karatra ianao dia mila mampiditra azy ao amin'ny tahiry "Studied" amin'ny alàlan'ny tsindrio ny bokotra "Studied" eo an-tampony ...
Archive ho an'ny karatra nianatra. Raha nianatra ilay karatra ianao dia mila mampiditra azy ao amin'ny tahiry "Studied" amin'ny alàlan'ny tsindrio ny bokotra "Studied" eo an-tampon'ny karatra misokatra. Amin'ny alalan'io tahirin-kevitra io dia ho afaka hitazona ny isan'ireo teny voatahiry ianao ary hamerina ny zavatra nianaranao taloha.
Io tahirin-kevitra io dia mifototra amin'ny fanadihadiana ny teny 500 ampiasaina indrindra. Ny teny dia nampidirina voalohany tany am-piandohana ny lazan'izy ireo sy ny fahamaroan'ny fampiasana amin'ny kabary mahatsikaiky.
Io tahirin-kevitra io dia mifototra amin'ny fanadihadiana ny teny 500 ampiasaina indrindra. Ny teny dia nampidirina voalohany tany am-piandohana ny lazan'izy ireo sy ny fahamaroan'ny fampiasana amin'ny kabary mahatsikaiky. Ny soatoavina marina indrindra dia miditra amin'ny teny fandikan-teny ary ny teny tsirairay dia afaka midika fa misy dikany maromaro ny fandikan-teny, ny sasany mety tsy hita ao anaty karatra. Ny fizarana rakitra "500 Populaires Words" dia ahitana rakitra 4624 amin'ny fiteny samihafa miisa 67 izay nianatra tamin'ny fitaovana android sy daty 4489 ho an'ny fitaovana IOS. Azonao atao ny misafidy ireo teny tsy hay hadinoina ary alefanao any amin'ny "Active Database" amin'ny alalan'ny klikanao ny bokotra "Move to Active" ao amin'ny karatra misokatra rehetra avy amin'io tahiry io.
Io tahirin-kevitra io dia mifototra amin'ny famakafakana ny teny 5000 ampiasaina indrindra. Ny teny dia ampidirina amin'ny filaharan'ny habetsaky ny fampiasana azy amin'ny fiteny voasoratra sy miteny. Raha mandritra ny fampiofanana ...
Io tahirin-kevitra io dia mifototra amin'ny famakafakana ny teny 5000 ampiasaina indrindra. Ny teny dia ampidirina amin'ny filaharan'ny habetsaky ny fampiasana azy amin'ny fiteny voasoratra sy miteny. Raha ao anatin'ny fampiofanana no nanakatanao ny fampiharana na nandao ilay daty ary te hiverina amin'ny karatra taloha, dia tsy maintsy miditra ny anaran'ny teny ao amin'ny boaty fikarohana ary tsindrio ny karatra tianao. Ny fizarana rakitra "5000 Populaire" dia ahitana rakitra 4624 amin'ny fiteny 67 samihafa izay nodinihina tamin'ny fitaovana android sy daty 4489 ho an'ny fitaovana IOS.
Io tahirin-kevitra io dia mifototra amin'ny famakafakana ny fehezanteny ampiasaina indrindra amin'ny kabary mahatsikaiky. Amin'ny fanampiana an'ity tahiry ity dia azonao atao ny mahazo ny fivoaran'ny lahateny lehibe sy ny lamin'ny soratra ...
Io tahirin-kevitra io dia mifototra amin'ny famakafakana ny fehezanteny ampiasaina indrindra amin'ny kabary mahatsikaiky. Amin'ny fampiasana an'io daty io dia azonao atao ny mamantatra ny fivoaran'ny lahateny lehibe sy ny filaharan'ny fanoratana ny sazy amin'ny fiteny izay hianaranao. Ankoatra izany, afaka mianatra ireo fehezanteny fototra ampiasaina amin'ny fifandraisana amin'ny fiteny vaovao ianao. Ny fizarana rakitra "500 Sentences" dia ahitana rakitra 4624 amin'ny fiteny miisa 67 izay nodinihina tamin'ny fitaovana android sy daty 4489 ho an'ny fitaovana IOS.
Fiaraha-miasa amin'ny rafi-panabeazana
Soso-kevitra ho fanatsarana ny fampiharana
Tolo-kevitra momba ny fampiasana vokatra avy amin'ny rindranasa hafa
Fampiasana fomba fampianarana vaovao amin'ny vokatra rindrambaiko
Fampidirana daty vaovao amin'ny fampiharana
Fiaraha-miasa amin'ny dokambarotra sy fampiroboroboana
Ho faly isika handinika ny karazana fiaraha-miasa rehetra. Azonao atao ny mandefa tolotra misy anao. Fenoy fotsiny ilay taratasy eto ambany.
FANAZAVANA HO AN'NY MOBILY APPLICATION
Hametraka ny fangatahana
Azonao atao ny maka ny fangatahanao maimaim-poana amin'ny lalao Google (ho an'ireo fitaovana Android) na fivarotana Apple (ho an'ny iPhones sy iOS fitaovana).
Rehefa vita ny fametrahana dia tsy maintsy mifidy ny tenin-dreninao sy ny fiteny fianarana ianao amin'ny lisitra, ary tsindrio ny bokotra "MANDRAKIZAY MANDRAKIZAY" ary ny rindrambaiko dia hamorona tahiry ho an'ny fianarana ny fiteny voafantina. Ary koa, ny tahiry dia ho noforonina ho an'ny angona misy anao sy ny fitaovana nampiharina. Lisitra feno rakitra azo jerena ao amin'ny menio fampiharana.
Amin'ny fitaovana misy ny rafitra fandefasana Android amin'ny fanononam-peo avo lenta sy ny feon'ilay mpilalao, ianao dia mila mametraka (maimaim-poana) ny fampiharana "Google text to speech" amin'ny Google Play Market. Rehefa tapitra ny fametrahana, mila manokatra ny fikandran'ny fitaovana ianao, sokafy ny "Teny sy ny fidirana", ao amin'ny fizarana "Text to speech" dia mamoaka ny "Google text to speech" ny rafitra fanalahidy. Ny fanononana ny fiteny dia mampiasa ny ankamaroan'ny fitaovana sy ny fiteny fianarana. Raha manana olana ianao amin'ny feon'ny fanononana, azafady tsindrio ny bokotra "Contact us" ao amin'ny sakafo ary soraty ny olana misy anao.
Mamorona karatra vaovao ary mameno ny daty manokana
Mba hampidirana ny angon-drakitrao sy hamoronana karatra vaovao, tsindrio fotsiny ny bokotra fanampiny (+ amin'ny farany ambany), eo am-baravarankely misokatra, midira ny lahatsoratra amin'ny fiteny sy ny fiteny fianarana. Ao amin'ny pejy fananganana karatra, azonao atao tsindriana ny bokotra miaraka amin'ny fakantsary, ary makà sary avy amin'ilay zavatra na mifantenana sary avy amin'ny fanangonana azonao atao amin'ny faran'ny karatra. Raha mahita zavatra na zavatra misy sanda tsy fantatra amin'ny fiteny fianarana ianao, dia azonao atao ny manao sary ao amin'ny pejy mba hamoronana karatra na misafidy sary avy amin'ny fitaovana sy manoratra teny ety aoriana. Ny sary dia azo ampidirina toy izany amin'ny karatra efa noforonina mba hamahàna ireo sary amin'ny sary, azonao atao izany amin'ny fipihana ny bokotra fanontana karatra (pensilihazo ao amin'ny menaky ambony).
Ny fitaovana dia mety hangataka anao hahazo alalana hampiasa ny fakantsary (amin'ny famoronana karatra misy sary). Mila mamaly am-panajana an'io hafatra io ianao mba hampiasa io endri-javatra io. Raha namaly "tsia" ianao tamin'ny hafatra, ary nanapa-kevitra ny hampiasa sary iray - dia tsy maintsy manavao ny fampiharana ary mamela ny fampiasana aorian'izany.
Hizaha sy hanokatra karatra
Ny endriny fototra amin'ny fampiharana dia ny famoronana ny fomba "Flash Cards" malaza ao amin'ny fitaovana finday ho an'ny fiteny fianarana mahomby, teny vaovao sy sazy. Raha hijery ny "Flash Cards" dia mila mametaka fotsiny ny lisitry ny daty voafantina ianao, aorian'izay dia hisokatra ny karatra. Raha hijery ny karatra manaraka, dia asio ny efijery havia na havanana na ampiasao ny bokotra arrow. Raha te hahita ny fandikan-teny na ny hevitr'ireo teny, tsindrio ny bokotra "Flip" eo afovoan'ny karatra eo ambonin'ny soratra maina na ny zana-tsipika "Flip" any amin'ny faran'ny ilany havia.
Hanova / Mametaka / Mamafa karatra
Mba hanovana, mila manokatra karatra ianao ary tsindrio ny bokotra fanontana (pensilihazo) ao amin'ny menus top. Raha handika ny lahatsoratra amin'ny karatrao dia tsindrio ny bokotra kopia ankavanana. Mba hanesorana karatra amin'ny fampiharana, tsindrio ny bokotra miaraka amin'ny urn ao amin'ny zoro havanana amin'ny farany.
Mampindrana karatra avy amin'ny tahiry iray amin'ny iray hafa
Ny fampiharana dia ahafahanao mandefa karatra any amin'ny tahiry "Active" (famoriam-bola manokana) sy ny tahiry "Studied". Raha te-handefa ny bokotra "Active" ianao, dia tsindrio ny bokotra ambany kokoa hoe "Move to Active", mba handefasana ny "Daty voafidy", dia mila manindry ny bokotra "Studied" (ny bokotra eo an-tampon'ny karatra misokatra).
Fanovana eo amin'ny lafiny fanokafana voalohany amin'ny karatra (fampisehoana ny teny / fandikan-teny voalohany)
Azonao atao ny mifidy ny lafiny voalohany amin'ny karatra fanokafana (teny na fandikan-teny). Mba hanaovana izany, sokafy ny sakafo (ao amin'ny zoro ambony havia) ary tsindrio ny "Sokafy voalohany", izay tsindrio ny sanda ilaina.
Fidio na manova ny tahiry
Mandehana avy amin'ny tahiry iray amin'ny iray hafa, tsindrio fotsiny ny menu (eo amin'ny farany ambony havia) ary fidio izay iray ilainao amin'ny lisitry ny tahiry, ary tsindrio ny iray ary asio izy.
Azonao atao ny manova ny fiteny teratany na fianarana amin'ny fampiharana amin'ny alàlan'ny fahazoana daty vaovao araka ny safidy vaovao anao. Mba hanaovana izany, sokafy ny sakafo (eo ankavanan'ny ankavia) ary tsindrio ny bokotra "Hanova ny fiteniko", dia manokatra ny pejy fanalahidin'ny fiteninao, izay ahafahanao manova azy, dia mila tsindrio ny bokotra "Mamoròna vaovao vaovao" . Ny tahiry "Active" sy "" Studied "dia hovonjena, ny sisa dia noforonina miaraka amin'ireo fiteny miova, araka ny safidy. TADIDIO fa raha te hanova ny fiteny misy ny data (mamorona karatra) amin'ny fiteny vaovao nofidianao ianao, dia mila mametraka azy ireo ao amin'ny sehatry ny fitaovana ianao!
Karatra fikarohana na teny
Ao amin'ny zoro havanana ambony dia misy bokotra fanombohana fikarohana, amin'ny alàlan'ny tsindrio izay mety ahitanao karatra, teny na fandikan-teny ao amin'ny daty voafaritra.
Mba hihainoana ny fanononana ny teny, mila mametaka ny bokotra miaraka amin'ny mpandahateny ao amin'ny lisitra na ny pejy karatra misokatra. Azonao atao ny mametraka ny fomba mahazatra ho an'ny fihainoana ny famoahana ny teny amin'ny fanokafana ny menio ary tsindrio amin'ny bokotra radiô ao amin'ny "Protoofina Auto", aorian'izay, ny teny tsirairay sy ny fandikan-teny dia hivoaka tsy miankina rehefa manokatra ny lafiny rehetra amin'ny karatra.
Fanombohana ny mpilalao
Mba hanombohana ilay mpilalao, mila mameno ny bokotra "mpilalao" ao amin'ny tontonana ambony (ankavia amin'ny fikarohana). Tsindrio eo amin'ny bokotra ary tsindrio ny karatra rehetra amin'ny baolina midina miaraka amin'ny fotoana fohy mora ahatsiarovana. Hanombohana ny mpilalao amin'ny teboka rehetra ao anatin'io lisitra io, alamino izany ary horavanao ny lisitra mankany amin'ny toerana tianao, miaraka amin'ny isa ny karatra fitendry eo amin'ny sehatry ny mpilalao dia miovaova indray, ary tsindrio ny bokotra indray ary manomboka amin'ny toerana voatondro. Mba hanakanana ilay mpilalao dia tsindrio fotsiny ny bokotra "X". Tadidio fa amin'ny fitaovana Android ho an'ny teny fitenenana avo lenta sy feo tsara ny mpilalao, ianao dia mila mametraka (maimaim-poana) ny fampiharana "Google text to speech" amin'ny Google Play Market. Aorian'ny fametrahana ny Google TTS, mila manokatra ny fikandran'ny fitaovana ianao, sokafy ny "Teny sy ny fidirana", tsindrio ny fizarana "Text to speech" ary ataovy ny "Google text to speech" ny rafitra fanalahidy.
Mamaky sy mamorona ny daty manokana
Raha te hametraka daty, dia mila mamorona dika soratra iray ianao miaraka amin'ny teny izay ianaranao sy dika iray misy rakitra miaraka amin'ny dikanteny na famaritana ao amin'ny solosainao manokana. Mba hanaovana izany dia zarao fotsiny ilay lahatsoratra avy amin'ny rakitra rehetra (ohatra avy amin'ny exel) ao amin'ny efitranon'ny solosaina, ary kitiho ny rakitra - tahirizo toy ny - ao amin'ny singa koditra, mifidiana UTF - 8. Ilaina ny manitsy ny koditra amin'ny UTF - 8 mamaky ny soratrao amin'ny fitaovana rehetra.
Avy eo dia alefaso any amin'ny fitaovana ampiasainao ny rakitrao amin'ny alàlan'ny alàlan'ny mailaka, ny tahirim-boankazo na ny cable USB Mandehana any amin'ny rindrankajy fampiharana, tsindrio ny bokotra "Download Database", ao amin'ny menio misokatra misafidy ny rakitra tahiry voatahiry ary tsindrio ny bokotra "Create a new loaded database".
Amin'ny fitaovana Apple, tokony manokatra solosaina aloha ianao, tadiavo ny tapakilanao ary ampio ny rakitra ao amin'ny fampiharana amin'ny alàlan'ny tsindrio ny "Import amin'ny LingoCard".
Azonao atao ny manangana tahiry vaovao na mampiditra angona amin'ny efa misy alohanao amin'ny fisafidianana ny singa mety ao amin'ny varavarankely misokatra.
Raha te hanokatra ny daty voatondro ianao dia tokony hifidy izany ao amin'ny lisitry ny tahiry. Amin'ny alalan'ity asa ity, dia afaka mamorona ho an'ny tenanao ny fitaovam-pampianarana ianao ary mampiasa izany miaraka amin'ireo fitaovana ampiasaintsika.
Hafatra diso. Mifandraisa aminay
Raha mahita fahadisoana ao amin'ny fampiharana, fandikan-dalàna diso ianao na manana faniriana ny sehatra fampiharana, azafady tsindrio ny bokotra "Contact us" ao amin'ny sakafo ary soraty ny hafatrao.